LostMiner: Block Building & Craft Game 1.3.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.4 လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း LostMiner: Block Building & Craft Game
LostMiner: Block Building & Craft Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သတ္တုတူးဖော်ရေး, Craft နှင့်တူးဖော်ရေးဒြပ်စင်နှင့်အတူ sandbox ဂိမ်း။ ဒါဟာပွတ် pixel ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ 2D နှင့် 3D, ရောစပ်တစ်ခြမ်း-အမြင်ကင်မရာရှိပါတယ်!
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသော biomes နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုများများနှင့်အတူတစ်ဦး, လုပ်ထုံးလုပ်နည်း pixel နှင့်အပြည့်အဝယူဖျက်ဆီးခြင်းကမ်ဘာပျေါတှငျ, သင်ချင်သမျှကိုပြုကြနိုငျပါသညျ!
ကျပန်းမြေအောက်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတူးနှင့်စူးစမ်း, နို့နွားတစ်ဦးငှက်ကုလားအုတ်စီး, ငါးဖမ်း go, အရင်းအမြစ်များကိုစုသိမ်းအသစ်ပစ္စည်းများလက်မှုပညာသစ်ပင်များခုတ်, အိမ်တအိမ်, တစ်ဦးစိုက်ပျိုးခြင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုး, တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံတညျဆောကျ, စစ်တိုက်မိကျောင်းလုပ်ကွက်ရာအရပျမြားနှငျ့ခြိုးဖကျြ, ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ကြိုးစား! အဆိုပါပိုမိုနက်ရှိုင်းကိုသင်သွားရ, ခက်ခဲကြောင့်ရရှိသွားတဲ့!
LostMiner ဝေးရုံအခြား Craft / 2D blocky ဂိမ်းဖြစ်ခြင်းကနေ, ကသစ်ကိုစိတ်ကူးများအများကြီးရှိပါတယ်သည်နှင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်အထူးစဉ်းစားဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်, သင်ထားတဲ့စွဲလမ်းတို့နှင့်ကြီးသောဂိမ်းကစားခြင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် Craft စနစ်, Wi-Fi မပါဘဲကစားနိုင်ပါတယ် နေရာတိုင်းကစားခံရဖို့အတှေ့အကွုံ!
LostMiner စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦး Indie ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, သင်တိုင်း update ကိုအပေါ် features အသစ်တွေကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းမဆိုအင်္ဂါရပ်အကြံပြု, ဒါမှမဟုတ်ရှိသည်ဖို့ချင်လျှင်, အကြှနျုပျကို (ferreira.marcelo@gmail.com) ဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။ အတူတူ LostMiner တည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်! ;)
- Pixel ဂရစ်ဖစ်
- ကို Creative နှင့် Survival သည် Modes
- အလိုလို Craft စနစ်
- အော့ဖ်လိုင်း (သင် Wi-Fi မပါဘဲကစားနိုင်ပါတယ်)
- ပြည်တွင်း multiplayer ထောက်ပံ့
- ကျူတိုရီရယ် (www.youtube.com/channel/UCpwAPutXGD2FkojSoPErV9w)
LostMiner: Block Building & Craft Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LostMiner: Block Building & Craft Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LostMiner: Block Building & Craft Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
LostMiner: Block Building & Craft Game အား အခ်က္ျပပါ
appstv89 စတိုး 1 477
LostMiner: Block Building & Craft Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း LostMiner: Block Building & Craft Game အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Caffetteria dev.
App Name: LostMiner: Block Building & Craft Game
Release date: 2019-08-18 14:22:14
လက်မှတ် SHA1: 98:68:1B:B0:F4:D7:EF:95:03:AF:F4:1C:1B:21:7C:CC:E0:D0:39:7F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Marcelo Silva
အဖွဲ့အစည်း (O): Indie
နယ်မြေ (L): Resende
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): RJ
LostMiner: Block Building & Craft Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ